Ukwenza kwe-Indy Business: Umnqamulajuqu ungakusasa! | Martech Zone
NgoLwesibili, ngoJulayi 28, i-2009 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Ngenkathi ngisezansi eHouston, esinye sezipikha sabona ukuthi inkampani izosebenzisa kanjani imali ethe xaxa endaweni yabo yokwamukela izivakashi kunokuba bazoyisebenzisa tholakala kuyi-Internet. Akekho obuza umkhiqizi wosofa ukuthi imbuyiselo yokutshalwa kwemali ikuphi kusofa omuhle wesikhumba endaweni yokwamukela izivakashi - kepha wonke umuntu uyasika futhi amashizolo ngezindleko ze- website entsha.
Izinkampani eziningi kakhulu zilishaya indiva isu leli ngokuphelele - limatasa kakhulu ngamasu wazo wamanje wokukhathazeka nge isu lokukhangisa online. Iwebhusayithi yakho izothola izivakashi eziningi ukwedlula indawo yakho yokwamukela izivakashi ngokuklama okuhle namasu ngemuva kwayo! Isikhathi sokwenza Ushintsho olungcono, kepha kunzima ukufakazela izindleko… cishe akunakwenzeka kulomnotho. Kuze kube manje…
Uma uyibhizinisi enkabeni ye-Indiana, nali ithuba! Kwinkampani eyodwa yendawo, umncintiswano we-Indy Business Makeover uzoba ukuvuselelwa okufanelekile. Inkampani ewinayo izothola izinsizakalo zokumaketha, iseva entsha, iWebhusayithi nefenisha yasehhovisi phakathi kweminye imiklomelo. Ngaphezulu kuka $ 80,000 yemikhiqizo enikelwe nezinsizakalo okuvela emabhizinisini endawo, i-Indy Business Makeover Competition ithi kubaninimabhizinisi abasebenza kanzima, "jabulela ushintsho olwenziwe kithi, usutholile."
Umnqamulajuqu wesicelo kusasa - Julayi 29, 2009! Bheka uhlu lwemiklomelo - afaka iphakheji yebhulogi engama-40 ne-Compendium Blogware, nayo! Ngizobona ukuthi ngingaxoxa yini neqembu ukuthi lingivumele ngiphonse iphakethe lokubonisana lama- $ 3,000 njalo eringini - ukusiza ngamasu wokuqukethwe, ukuhlanganiswa kwemithombo yezokuxhumana, ukuqapha ukuguqulwa, njll.
Umsebenzi omuhle ngabantu e Ibhokisi Elincane futhi Ukumaketha kwePivot ngokufaka lo mncintiswano omkhulu.
Tags: okuzenzakalelayoidatha yebhidiibhodi lokukhohlisaGuy Kawasakiizindlovuivars ibhodi lokukhohlisaizindlovu chowderumagazineukukhangisa ngevidiyo